रोजगारी गुम्दा बढ्ने भयो गरिबी | Nagarik News - Nepal Republic Media
आम्दानी नभएपछि कहाँबाट खर्च गर्ने ?
७ भाद्र २०७७ १२ मिनेट पाठ
गत वर्ष नेपालका लागि केही सुखद खबर आयो। गत वर्ष (सन् २०१९) नेपाल निम्नमध्यम आय भएको श्रेणीमा उक्लियो। नेपालीको प्रतिव्यक्ति आम्दानी एक हजार ९५ अमेरिकी डलर पुगेपछि मुलुकको हैसियत पनि बढेको थियो। सरकारले सन् २०३० सम्ममा मुलुकलाई मध्यम आयस्तरको श्रेणीमा पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ। अहिले गरिबी करिब १८ प्रतिशत छ। मध्यम आयस्तरमा पुग्न पाँच प्रतिशतमा झार्नुपर्ने हुन्छ। तर दुर्भाग्य, यही समयमा देखिएको कोभिड १९ महामारीले गतवर्षको सफलता र आगामी लक्ष्यमा तुषारापात हुने देखिएको छ।
कोभिड—१९ का कारण व्यापार गर्न नपाएपछि उनीसँग भएको बचत सकिएको छ। ‘आम्दानी एक रूपैयाँ छैन,’ निन्याउरो अनुहार लगाउँदै उनले भनिन्, ‘अब भएको बचत सकियो, कसरी जीविका चलाउने ?’ अहिले तामाङ परिवारले दैनिक उपभोग्य वस्तु किन्ने क्षमता गुमाएको छ।
आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प हुँदा आर्थिक वृद्धिमै संकुचन आइसकेको छ। अहिलेसम्म आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ मा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर २.२८ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान गरिएको छ। वास्तविक तथ्यांक योभन्दा पनि कम आउने सम्भावना छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले सन् २०२० मा विश्व अर्थतन्त्र ४.९ प्रतिशतले संकुचन हुने बताइसकेको छ। कोभिडका कारण नेपाल मात्र नभएर विश्वले मानवीय एवं आर्थिक क्षति बेहोरेको छ। यसले आम्दानी नभएपछि मानवीय स्वास्थ्यका समेत गम्भीर असर देखिनेछ। खर्च गर्ने क्षमता गुमेपछि सर्वसाधारणले आवश्यक पोषिलो खाने कुरा खान सक्दैनन्। त्यसले विशेष गरी सुत्केरी, बालबालिका, वृद्धवृद्धा र दीर्घरोगीमा असर पार्नेछ।
कोभिडले निम्नदेखि उच्च वर्ग सबैलाई असर पुगेको उद्योगपति विनोद चौधरी बताउँछन्। कोभिड प्रकोपकै बीच एउटा (भर्चुअल लिटरेचर फेस्टिभल) मा केही समय अघि चौधरीले भनेका थिए, ‘कोभिडपछि व्यक्तिको क्रयशक्ति घट्नेछ। यसले गर्दा आम नागरिकले उपभोग घटाउन बाध्य हुनुपर्छ। अनि आपूर्ति र उत्पादन शृंखला खलबलिन सक्छ।’ चौधरीका अनुसार नेपालजस्तो विकासोन्मुख राष्ट्रमात्र नभएर विश्वका शक्ति राष्ट्रको सन्तुलन र व्यापारमा पनि यसले फेरबदल ल्याउने सम्भावना छ।
कोभिडका कारण उत्पादन र बिक्री खुम्चिएको छ। खर्च गर्ने क्षमता घटेपछि उपभोग घटेको छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा पोहोर आयात १५.६३ प्रतिशतले घटेको थियो। आयात घट्नुलाई राम्रो मानिए पनि स्वदेशमा उत्पादन वृद्धि भएर आयात घटेको भने होइन। अघिल्लो वर्ष वैदेशिक व्यापार १५ खर्ब १५ अर्ब रूपैयाँ रहेकोमा पोहोर वैदेशिक व्यापार १२ खर्ब ९४ अर्ब रूपैयाँमा सीमित भयो। उपभोगका आएको कमीका कारण पनि व्यापार खुम्चिएको हो।
नेपालको रोजगारी बजारमा प्रत्येक वर्ष पाँच लाख मानिस थपिन्छन्। पछिल्लो तथ्यांकअनुसार दुई करोड सात लाख नेपाली काम गर्ने उमेरका छन्। करिब ७१ लाख मानिस कुनै न कुनै प्रकारको रोजगारीमा भए पनि ६० प्रतिशत रोजगारी असंगठित क्षेत्रमा रहेको बताइन्छ। अहिले असंगठित क्षेत्रमा काम गर्ने अधिकांशले रोजगारी गुमाएका छन्। विशेष गरी साना घरेलु उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, होटेल, पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्नेको संख्या ठूलो छ। राष्ट्र बैंकले गरेको हालैको एक अध्ययनमा उद्योगी व्यवसायीले एकचौथाइ कर्मचारी तथा कामदार कटौती गरेको पाइएको छ। व्यक्तिगत स्वरोजगारमूलक उद्योगको तथ्यांक यसमा समावेश छैन। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ)का अनुसार नेपालमा कार्यरतमध्ये १६ लाखदेखि २० लाखले रोजगारी गुमाएका छन्।
कोभिडको प्रकोप लम्बिँदै जाँदा यसको असर कृषि क्षेत्रमा पनि परेको छ। उत्पादित सामग्रीको ढुवानी र वितरण प्रणालीमा समस्या आउँदा खाद्यान्न उत्पादनमा कटौती हुन्छ। नेपालमा करिब तीन दर्जन जिल्लामा खाद्यान्न अपर्याप्त हुन्छ। कर्णालीका सबै, सुदूरपश्चिमका केही जिल्ला खाद्य जोखिममा छन्। कोभिडको कारण सहरी क्षेत्रमा पनि खाद्य जोखिम बढेको छ। आम्दानीको स्रोत एउटा मात्र भएका घरधुरी, घरमा खाद्यवस्तु तथा बचत मौज्दात नभएका
तथा दैनिक ज्यालादारी गरेर खर्च चलाउनेमा खाद्य असुरक्षा बढेको हो। नेपालको खाद्य असुरक्षा बढेर २३ प्रतिशतमा पुगेको एक सर्वेक्षणले देखाएको छ। १५ प्रतिशत घरधुरीले पर्याप्त खाद्यान्न उपभोग गर्न नपाएको अवस्थामा आठ प्रतिशत बढेर २४ प्रतिशत पुगेको संयुक्त राष्ट्रसंघीय विश्व खाद्य कार्यक्रमले गरेको सर्वेक्षणमा देखिएको थियो। कोरोनाले प्रत्येक १० घरधुरीमध्ये एकमा जीविकोपार्जनका उपाय अवरुद्ध भएको र १० घरधुरीमध्ये तीनमा आयआर्जन घटेको अध्ययनमा देखिएको थियो।
खाद्य पहुँच र जोखिमका हिसाबले ज्यालादारी काम गर्ने मजदुर, महिला बढी प्रभावित भएका छन्। कोभिडले जनतामा बेरोजगारी र गरिबीतर्फ धकेल्न सक्ने अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सार्वजनिक कार्यक्रममा बताउँदै आएका छन्। ‘गरिबी निवारणमा प्राप्त गरेको सफलता यसले कमजोर बनाएको छ,’ उनले भनेका छन्, ‘दिगो विकास लक्ष्य हासिलमा पनि यो थप चुनौती बनेको छ।’ खतिवडाले धनी, गरिब सबैमा अप्रत्याशित र अनपेक्षित जोखिमको सामना गर्नु परेको बताए।
शंकर शर्मा, अर्थशास्त्री
स्वाभाविक रूपमा हो। यसले प्रत्यक्ष रूपमा ३० लाख मान्छेलाई आघात पारेको छ। निजी क्षेत्रमा काम गर्नेको तलब घटेको छ। औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने ठूलो संख्या बेरोजगार भएका छन्। किन्न सक्ने क्षमता भएकाले पनि किनेका छैनन्। चैतदेखिको लकडाउनले बाहिर ननिस्किँदा व्यापार, व्यवसाय, पर्यटन क्षेत्र ठप्प छ। यसले रोजगारी गर्नेमात्र नभएर व्यापार, उद्योग चलाउनको पनि आम्दानी घटेको छ। उदाहरणका रूपमा शैक्षिक संस्था ठप्प हुँदा दुई लाख शिक्षकले काम पाएका छैनन्। उनीहरूले तलब नपाएपछि कहाँबाट खर्च गर्ने ? कम आम्दानी भएपछि स्वाभाविक रूपमा खर्च पनि कम गर्छन्। बिक्री नभएपछि उत्पादन हुने कुरा भएन। माग कम भयो।
दुईतिहाइ नेपाली कृषिमा भने पनि उनीहरूले कृषिसँगै अन्य क्षेत्रमा पनि काम गर्दै आएका छन्। अहिले पनि अर्बौंको कृषिजन्य वस्तु विदेशबाट आयात भइरहेको छ। हामीले आफ्नो उत्पादन मात्र हेर्ने होइन। कृषि बाहेक ठूलो संख्यामा सहरी क्षेत्रमा काम गर्छन्। कृषि क्षेत्र रोजगार, व्यापार, व्यवसाय गर्नेको संख्या पनि ठूलो छ। विशेष गरी कृषिमा कम प्रभाव परेको भने पछि उत्पादनले बजार पाउन नसकेको गुनासो सुनिन्छ। यसपालि वर्षा भएपछि किसानले मल पाउन सकेनन्। त्यसले उत्पादनमा असर पार्छ। यी विविध कारणले खाद्य असुरक्षा पनि बढेको देखिन्छ।
प्रकाशित: ७ भाद्र २०७७ ०६:३५ आइतबार
काेराेना कहर बेरोजगारी काेभिड असर